Uncategorized | MoeMaKa Burmese News & Media
Metta Shin Sayadaw U Zawani Dhamma Talk - 1st Sept, Sacramento
၂၈ အောက်တိုဘာ - မိုးမခရေဒီယို
21st October - မိုးမခရေဒီယို
Min Kaung Chit (Mandalay) - Articles
မင်းကောင်းချစ် – အာဏာပဒိုင်းသီး ၊ စက္ကူစိတ်ပုတီး နဲ့ စာဖတ်သူကြီးရဲ့ဦးနှောက်လျှော်ဖွတ်ခြင်းဓလေ့
အာဏာပဒိုင်းသီး ၊ စက္ကူစိတ်ပုတီး နဲ့ စာဖတ်သူကြီးရဲ့ဦးနှောက်လျှော်ဖွတ်ခြင်းဓလေ့ မင်းကောင်းချစ်၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၄ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့အချမ်းသာဆုံးနဲ့ အလားအလာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဘ၀ကနေ ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု့အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ကျခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့လူ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမှု့အနိဌာရုံတွေ၊ စစ်ပွဲကြီးတွေ၊...
ဇာနီကြီး – မော်လမြိုင်မှ ကျိုက္ခမီပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ ၅၅ မိုင်ခရီးစဉ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်အကြောင်း
မော်လမြိုင်မှ ကျိုက္ခမီပင်လယ်ကမ်းခြေသို့ ၅၅ မိုင်ခရီးစဉ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်အကြောင်း ဇာနီကြီး ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ ဘုရားတည်ခြင်းနဲ့ရုပ်ပွားတော်တည်ဆောက်ခြင်းများထက် လောကီ၊ လောကုတ္တရာပညာရေးအတွက်လှုဒါန်းတာ ပိုမွန်မြတ်ပါတယ် ပြောရင်၊ ရေးရင် အန္တရယ်များလှပါတယ်။နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ မပြောရဲဆုံး၊ လူထုထောက်ခံမှု ပျက်သွားနိုင်တဲ့...
၂၀၁၄ သင်္ကြန် သံချပ် (မိုးမခ မဏ္ဍပ်) (၁) ဂျော်ဒီး ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၄ သရုပ်ဖော် – ကာတွန်း စောငို *** ရှာပုံတော်..မင်းသားကြီး ..မဏ္ဍပ်တကာ ရောက်ခဲ့ပြီ .....
မောင်စွမ်းရည် မတ်လ ၈၊ ၂၀၁၄ ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီး “မောင်ထင်” ကို လယ်သမားကြီး “ငဘ” ဝတ္ထုရေးတဲ့ စာရေးဆရာ၊ “ကိုဒေါင်း” ဝတ္ထုတိုများရေးတဲ့ စာရေးဆရာ၊ “ယောမင်းကြီး အတ္ထုပတ္တိနှင့် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်းကို တည်းဖြတ်ရေးသားသူ...
သမုိုင်းတကွေ့မှ သခင်တင်မြ – အပုိုင်း (၆)
သန်းဝင်းလှိုင် မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၄ ယင်းအဖွဲ့ကို အကူအညီပေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာမှုအဖွဲ့ကို ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကို ၊ ဦးဘငြိမ်၊...
ကွန်ကရစ်တောထဲက သားကောင်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲက ချိုးငှက် – အပိုင်း (၂၀)
အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ထောင်အကြောင်းတွေကို ရေးလိုက်တိုင်း နာကျင်မှု့တွေ၊ သောကတွေ၊ ဖိနှိပ်မှု့တွေချည်း ကြားနေရချိန်မှာ ထောင်ထဲက ပျော်စရာ ရွှင်စရာအကြောင်းကို ရေးပြတော့ လူတွေက ယုံတမ်းစကားဟု ထင်ကြမည်။...
မေမေ ငိုဖို့ စာလေးတပုဒ် ကေသွယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၄ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကယူပါတယ်၊ အမေများနေ့အတွက် အမှတ်တရ) ခုနစ် နှစ် သမီးလေးထဲက ထားခဲ့ရတော့.. အမေကို မခင်ဘူးပေါ့… လို့ မေမေက...
သွှအောင်၊ ဂျွန်သင်ဇမ်း၊ သျှမ်းလျန် တို့၏ တေးစုသစ် ထွက်ပြီ မိုးမခ ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဗမာ့စတီရီယို ခေတ်ဦးနှောင်း မှာ တမူထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဂီတဖွဲ့သီဆိုမှု တွေ နဲ့...
ကာတွန်း လုိုင်လုဏ် – ဆီးဂိမ်း ပရုိုမုိုးရှင်း …
ဆီးဂိမ်း ပရုိုမုိုးရှင်း ကာတွန်း လုိုင်လုဏ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း လုိုင်လုဏ် – ၀မ်း … တူ … တမ်း
၀မ်း တူ တမ်း ကာတွန်း လုိုင်လုဏ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဦးနန္ဒဝံသ (ကာရိုလိုင်းနား) – အိုဘားမားကဲယားနှင့် ဆရာတော်ဘုရား
အိုဘားမားကဲယားနှင့် ဆရာတော်ဘုရား ဦးနန္ဒဝံသ (ကာရိုလိုင်းနား) ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလလယ်ရဲ့နေ့တစ်နေ့၁ဝရက်ကြာမျှကျင်းပခဲ့တဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ အဇူဇာကျောင်းပဋ္ဌာန်းပွဲက ပြန်လာပြီးတဲ့ နောက် ကျောင်းရဲ့ ကထိန်ပွဲ၊ အခြားအခြား...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် – သမ္မတကြီးနဲ့ နာယကကြီးကိစ္စစကားဆက်၊ ဘိနပ်တစ်ဖက် ဘယ်တော့ပစ်ချမှာလဲ
သမ္မတကြီးနဲ့ နာယကကြီးကိစ္စစကားဆက်၊ ဘိနပ်တစ်ဖက် ဘယ်တော့ပစ်ချမှာလဲ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃ …………………………………………….. ဒီတစ်ခါတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိပါဘူးဗျာ။ တစ်ယောက်ယောက်က မေးလာတယ်ဆိုပါစို့။ ဗျို့ ဘဘကြီးခင်ဗျား။ လူရာဝင်၊ သူရာဝင်...
ကာတွန်း လုိုင်လုဏ် – ကျေးဇူးရှင်
ကျေး ဇူး ရှင် ကာတွန်း – လုိုင်လုဏ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငုို – အချိန်မတန်သေးသူတွေ
အချိန်မတန်သေးသူတွေ ကာတွန်းစောငုို ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဇာနည်ကြီး – မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင် အရေးအခင်း
မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင် အရေးအခင်း ဇာနည်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ၂၀၁၁တုန်းက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong-il မှာ တစ်ဦးတည်းသော ညီမအရင်း Kim Kyung Hui ဆိုသူရှိပါတယ်။ အစ်ကို...
ကာတွန်း စောငုို – သမ္မတကြီး သဘော
သမ္မတကြီး သဘော ကာတွန်း စောငုို ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငုို – ရေးခဲ့တာ .. ဟုိုကောင် ဟုိုကောင်
ရေးခဲ့တာ …ဟုိုကောင် ဟုိုကောင် ကာတွန်း – စောငုို ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဟင်္သာတမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြီး မတရားရယူသိမ်းပိုက်ထားသော မြေနေရာများနှင့်ပတ်သက်၍ လစဉ် ကောက်ခံရရှိသောငွေကြေးများ ဘယ်နေရာတွင် သုံးစွဲနေသလဲ ??? (မုိုးမခပေးစာ) ဟင်္သာတ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ (၄)ခုရှိရာ၊...